Yechokwadi-nguva Kodhi Kubatana neChikwata | Martech Zone
Svondo, Zvita 20, 2009 Mugovera, October 20, 2012 Douglas Karr
Chikwata ndechekusimudzira zvinoitwa neGoogle magwaro kuhofisi masutu. NeChikwata, timu yekusimudzira yakapararira pasirese inogona kuvhura iyo yakafanana faira, ishande pairi panguva imwe chete, uye taura nezve edhiyo. Hapasisina misangano yakareba yekutarisa kodhi uko timu irikufamba-famba ichitenderedza, ichipedzerana zvigadzirisane, kubatanidza pamwe nekurovera iwo marongero… Chikwata chinogadzira kana zvisingashande.
Squad ndeyewebhu-yakavakirwa, Software seSevhisi mhinduro iri zvinodhura zvinodhura. Kana iwe uri mumwe mushandisi, iwe unogona kunyange kuishandisa mahara! Kwe $ 39 / mwedzi iwe unogona kuwana timu timu pasuru inosvika kumamiriyoni mashanu.
Tags: code editorkubatsiranachikwata